२०२२ मा कोडरहरूका लागि १० उत्कृष्ट उच्च-भुक्तानी गर्ने प्राविधिक कम्पनीहरू - Shiv's Era
अनलाइन पैसा कमाउनुहोस्
क्रिप्टो र मेटावर्स
धर्म र पौराणिक कथा
फेसन र जीवनशैली
राजनीति र शासन व्यवस्था
वित्त र व्यापार
सम्पत्ति र ऋण
स्वास्थ्य र आयुर्वेद
२०२२ मा कोडरहरूका लागि १० उत्कृष्ट उच्च-भुक्तानी गर्ने प्राविधिक कम्पनीहरू
1. शीर्ष टेक कम्पनीहरूमा राम्रो भुक्तानी पाउनुहोस्।
2. रोचक र चुनौतीपूर्ण परियोजनाहरूमा काम गर्नुहोस्।
3. उत्कृष्ट कार्य-जीवन सन्तुलनको आनन्द लिनुहोस्।
4. प्रतिस्पर्धात्मक लाभ र क्षतिपूर्ति प्याकेजहरूबाट लाभ उठाउनुहोस्
२०२२ मा शीर्ष-भुक्तानी गर्ने प्रोग्रामिंग काम कसरी प्राप्त गर्ने
प्राविधिक कम्पनीहरू सधैं एक प्रोग्रामरको खोजीमा हुन्छन् जसले एक भन्दा बढी प्रोग्रामिङ भाषा जान्दछ र दबाबमा राम्रोसँग काम गर्दछ। यस लेखले शीर्ष १० उच्च-भुक्तानी गर्ने प्राविधिक कम्पनीहरू कोडरहरू २०२२ मा आवेदन गर्नुपर्छ।
Google ले प्रोग्रामरहरूलाई $180,000 प्रति वर्षमा राख्छ
Google ले उत्कृष्ट र उज्यालो प्रोग्रामरहरूलाई US$180,000 एक वर्षमा राख्छ। कोडरहरूका लागि तिनीहरूको सुरुको तलबले त्यो साथसाथै तिनीहरूको सुरुको तलब पनि झल्काउँछ।
Apple को 2017 तलबहरू – जहाँ जागिरको लागि आवेदन दिनको लागि उत्तम ठाउँ हो
एप्पलले US$175,000 र US$600,000 बीचको आकर्षक तलब प्याकेजहरू प्रदान गर्दछ। यो प्रोग्रामरहरूको लागि उत्तम कम्पनीहरू मध्ये एक हो।
फेसबुक संसारमा उच्च भुक्तानी गर्ने प्राविधिक कम्पनीहरू मध्ये एक हो। सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूले हप बन्द लगभग छ अंक कमाउन अपेक्षा गर्न सक्छन्। कम्पनीमा अन्य ठूला ब्रान्डको तुलनामा पूर्व कर्मचारीहरूले धेरै गुनासो गरेका छन्।
अमेजन किन प्रोग्रामरहरूको लागि उत्कृष्ट स्थान हो
अमेजन प्रोग्रामरको रूपमा बढ्नको लागि असाधारण रूपमा राम्रो ठाउँ हो। तपाईंलाई रोचक काम र उत्कृष्ट तलब दिइनेछ। काम-जीवन सन्तुलनमा कम्पनीमा हिट वा मिस हुने प्रतिष्ठा छ।
किन माइक्रोसफ्ट काम गर्नको लागि उत्कृष्ट ठाउँ हो
Microsoft ले उत्कृष्ट तलब र लाभहरू, रोमाञ्चक काम, र धेरै प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने मौका प्रदान गर्दछ। माइक्रोसफ्ट शीर्ष टेक्नोलोजी कम्पनीहरू मध्ये एक हो र ताजा प्रोग्रामरहरूको लागि एक प्रतिष्ठित ल्यान्डिङ स्थान पनि हो।
Nvidia: काम गर्नको लागि उत्तम कम्पनी
Nvidia ले आफ्ना विकासकर्ताहरूलाई वार्षिक रूपमा US$ 115,000 मा सूचीमा रहेको बाँकी भन्दा बढी सुरु हुने तलब प्रदान गर्दछ। रिपोर्टहरू अनुसार, Nvidia २०२२ मा काम गर्नका लागि उत्कृष्ट टेक्नोलोजी कम्पनीहरू मध्ये एक हो।
नेटफ्लिक्स इन्जिनियरहरूले हरेक दिन हजारौं लाइनहरू कोड पठाउँछन्
Netflix इन्जिनियरहरूले हरेक दिन हजारौं लाइनहरू कोड पठाउँछन्। कोर इन्जिनियरिङ्ले Netflix टेक स्ट्याक सिर्जना गर्ने, निर्माण गर्ने, परीक्षण गर्ने, डिप्लोइ गर्ने, स्ट्रिमिङ गर्ने, र निगरानी गर्ने काममा केन्द्रित रहेको नेटफ्लिक्समा धेरै टोलीहरू फैलाएको छ। नेटफ्लिक्स २०२२ को उच्च-भुक्तानी गर्ने प्राविधिक कम्पनीहरू मध्ये एक हो।
Adobe को बारे मा सबै भन्दा राम्रो कुराहरु
Adobe सँग उच्च कर्मचारी-मैत्री कार्यस्थल छ जसले कर्मचारीको स्वास्थ्य, नवीनता, र वृद्धिलाई प्राथमिकता दिने काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ। आकर्षक प्याकेजहरू US$175,000 र US$450,000 बीचको दायरा, लाभहरूको एर्रेको साथ।
Salesforce के हो र तपाईंले यसलाई किन विचार गर्नुपर्छ?
Salesforce एउटा सफ्टवेयर कम्पनी हो जसले कम्पनीहरूलाई उद्यम अनुप्रयोगहरूको दायरा प्रदान गरेर ग्राहक सम्बन्धहरू व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ। यसले आफ्ना प्रोग्रामरहरूलाई US$200,000 र US$450,000 बीचको वार्षिक प्याकेज तिर्छ।
HubSpot: सबैभन्दा सफल कम्पनी मध्ये एक
HubSpot एक CRM प्लेटफर्म हो जसले व्यवसायहरू बढ्न मद्दत गर्न सफ्टवेयर र उपकरणहरू प्रदान गर्दछ। 2006 मा स्थापित, यो गुगल, फेसबुक, Amazon, र मनपर्ने मा प्रतिस्पर्धी छ।
This post is also available in: हिन्दी (Hindi) English Tamil Gujarati Punjabi Malayalam Telugu Marathi Nederlands (Dutch) Français (French) Deutsch (German) עברית (Hebrew) Italiano (Italian) 日本語 (Japanese) Melayu (Malay) Polski (Polish) Português (Portuguese, Brazil) Русский (Russian) বাংলাদেশ (Bengali) العربية (Arabic) Español (Spanish) اردو (Urdu) Kannada
तपाईको बिग डाटा स्टार्टअपमा १०% हिस्सेदारीको लागि $ 200,000 कसरी प्राप्त गर्ने: लगानीकर्ताको मापदण्ड
क्रिप्टो र मेटावर्स / By Editor, Shivira.com
अग्रणी उद्यम एआई कम्पनी
ब्रेनस्टोर्मिङ र माइन्ड म्यापिङका लागि EdrawMind कसरी प्रयोग गर्ने: अन्तिम गाइड
तपाईंको वेबसाइटको लागि च्याटबोट कसरी सिर्जना गर्ने: अन्तिम गाइड
शीर्ष US र UK विश्वविद्यालयहरूमा पाठ्यक्रमहरू
कारणहरू किन Bitgert Blockchain सोलाना, Cardano, हिमस्खलन र Matic भन्दा उच्च छ
तपाईको डेटा विज्ञान क्यारियर सुरु गर्ने वर्ष
क्रिप्टो विश्लेषकहरू भन्छन् बिटकोइनको तल्लो भागमा छ: भविष्यवाणीहरू र अगाडि चुनौतीहरू